Semalt: Sei Unoda Kuisa Pfungwa Pamusoro Pokutengeserana KweDhigiriji
Ikozvino, nekuda kwekugadziriswa uye zvikomborero zvinowanikwa mazviri, tsikabhizimisi vari kutanga kutora kuti vaizobatsirwa zvikuru kana vakagamuchira kudhinda kwema digital.
"Gore rekufambisa" rave riri hurukuro yenyika yepasi pose kwemakore akawanda.Inotaurwa kuti gore ra2014 raiva rechitatu rinotevera "gore rekufambisa" - stylish sun hats. Makore anotevera, kusvika muna 2016, akagamuchirawo izvikudanidzira maererano neHupenyuHack. Inoreva kukura zvishoma nezvishoma kwemafoni esimba achikura kuti ave mukuruplatform inoshandiswa kutarisa webhu uye kwete gore rakasiyana.
Mutengi Wekutengesa Mubudirira we Semalt ,Andrew Dyhan, anopa ruzivo rwezvinhu zvinokosha zvekutengeserana kwema digital uye ikozvino kukosha.
Nhamba dzinoratidza kuti:
Imari yekufungidzirwa kwekutsvaga ye Facebook ye 2016 yaiva $ 26 biliyoni. Mobile mafairayakaitwa kusvika ku80 muzana yeiyo ($ 21.98 mabhiriyoni)
Kusvika 69 kubva muzana yezvirongwa zvemagetsi zvekudhiridzira zvinoshandiswa kutarisa kumashure emafoni.
Nevashandi vanopfuura mamiriyoni 500, mazita e-Instagram sevanhu vanokurumidza kukuranetwork and integrates easily with Facebook marketing.
Kuchengetedza data kubva kuTrive Analytics, e-Marketer post, zviduku uye zvemashamba mabhizimisimuUnited States anoronga kupedza zvakawanda pamushambadziro nekunyanya kusimbisa pamusoro pemakwikwi muna 2017. Chikonzero chechisarudzo ichi ndechokutivanhu vanoramba vachiine mafoni emafoni. Masere makumi masere muzana yevashandisi veIndaneti muUnited States vane smartphone kubva pane zvaitikaComScore. Zvimwe zvezvikonzero nei smartphones vachienderera mberi kupararira ndezvokuti Apple akasika C-series ye iPhone,Android ine smart-end-end smartphones iyo yakawanda inotakura inopa, uye yakasimba yechipiri-ruoko smartphone misika.
Mimwe mikana yebhizimisi yekushandisa zvakanaka inosanganisira:
Google AdWords uye Facebook Ads for target target.
SnapChat filters kutarisa vashandisi mune imwe nzvimbo..
Yelp kuparidzira inobatsira mukuisa mabhizinesi mumakwikwi mazano paYelp.
Bhizinesi rezvemabhizimisi dzinofanira kutora ruzivo rwechitima che digital. Kana zvisina kudaro,vatambi vepamusoro vachavabudisa kunze.
Vanhu pavanotaura nezvebhizimisi uye kutengesa, yemauto eAmazon inogara ichidzokapavanotaura. Vatariri vanopfuura mamiriyoni makumi mana vanobhadhara kubhizimisi reAmazon prime. Mutengo wekubhadhara wegore negore weAmazon yakawanda$ 8 biliyoni, kwete kubhadharwa neChishanu nhengo yekushandisa.
Amazon inowira pasi peboka remabhizimisi makuru. Mubvunzo ndewekuti abhizinesi duku kana yekambani inogona kukwikwidzana nemakambani makuru akadaro. Zvinonyanya kukosha asi zvinoda basa rakawanda kubva kune vatengesi vavo.
Ndezvipi zvidhinho zvemadhini uye zvekune dzimwe nzvimbo zvinofanira kuitwa
Kune nzvimbo ina mabhizinesi anofanira kutarisa kana vachizoponadigital world. Vanogona kusashandira mabasa ose emabhizinesi, asi vanoshumira sekunakisisa kutanga mapeji:
1. Nzvimbo-based based advertising achishandisa Facebook, kana Instagram.
2. Leveraging startups inobatsira vatengi kuronga uye kutenga zvinyorwa paIndaneti zvakadaroseSeamless, Instacart, Caviar, uye Postmates.
3. Kupa zvakanakisisa mu-store zviitiko kana nzvimbo dzinopa vatenginekutengesa zviri nyore.
4. Yakagadzirwa e-commerce chiteshi. Nezvi, mumwe anofanirwa kuenzanisa zvigadzirwa zvakadaiKudzokorora zvakare kuburikidza nehuwandu hwevanhu (Facebook) kuwedzera kutengesa.
Hazvisi nyore kumabhizimisi mashoma nekuda kwekukwikwidza kwakasimba. Tariro,maonero kubva kuna Semalt anojekesa zvinhu zvishomanana zvavanogona kuita kuti varambe vakabatana uye varambe vachibudirira.